The Little Mermaid ဇာတ်ကားမှာမင်းသားလေးအဲရစ်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တော့မဲ့ Harry Styles - Cele Gabar
The Little Mermaid ဇာတ်ကားမှာမင်းသားလေးအဲရစ်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တော့မဲ့ Harry Styles
ဒစ်ဒနေးဟာ The Little Mermaid ကာတွန်းကားကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်အသက်သွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ကာတွန်းကားကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေကလည်း ဒီဇာတ်ကားမှာပါဝင်မဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကိုအထူးစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိနေပါတယ်။နှစ်ပေါင်း(၃၀)ခန့်ရှိပြီဖြစ်တဲ့The Little Mermaid ဇာတ်ကားရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေဟာ ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားသလို ထပ်တူကျတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။
ရေသူမလေးအေရီရယ်နေရာမှာသရုပ်ဆောင်မဲ့သူကို Halle Bailey အဖြစ်ကြေငြာပြီးနောက်မှာ ဇာတ်ရုပ်နဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုပြီး အတော်လေးဂယက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလေးအဲရစ်နေရာကိုတော့ ထင်ကြေးပေးခံရတဲ့အထဲမှာ Harry Styles တစ်ယောက်လည်းအပါအ၀င်ဖြစ်နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေစိတ်ကြိုက်ဖြစ်မဲ့ပုံပါပဲ။ Harry Stylesဟာ မင်းသားလေးအဲရစ်ဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ ဇူလိုင်လကတည်းကပြောဆိုနေခဲ့တာပါ။အခုတော့ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
(၁၉၈၉)ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ မူရင်းဇာတ်လမ်းမှာတော့ မင်းသားအဲရစ်ရဲ့သီချင်းဆိုတဲ့အခန်းမပါဝင်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအဖြစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးရာမှာတော့ ပုံစံအသစ်နဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး မင်းသားအဲရစ်က Alan Menken နဲ့ Lin-Manuel Miranda တို့ရေးသားတဲ့ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ကိုသီဆိုဦးမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒစ်စနေးကတော့ အသံကောင်းကောင်းနဲ့သီချင်းအဆိုပိုင်နိုင်တဲ့ မင်းသားတစ်လက်ကိုရွေးချယ်ချင်ပုံရပါတယ်။ Harry ကတော့ ဒစ်စနေးလိုချင်သလို အတိအကျဖြစ်လာခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်ဦးဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာပါဝင်မဲ့ဘုရင်ကြီးထရိုင်တွန်နေရာကိုတော့ Javier Bardem နဲ့ပြောဆိုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ စုန်းမကြီးနေရာမှာတော့ Melissa McCarthy ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒစ်စနေးကပြန်ရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ “Aladdin” ဟာ လူကြိုက်များခဲ့သလို “Lion King” ဟာလည်း စံချိန်တင်ဝင်ငွေနဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာရိုက်ကူးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ The Little Mermaid ဟာလည်း ပရိသတ်တွေအကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျဦးမလားနော်….
The Little Mermaid ဇာတျကားမှာမငျးသားလေးအဲရဈအဖွဈသရုပျဆောငျတော့မဲ့ Harry Styles
ဒဈဒနေးဟာ The Little Mermaid ကာတှနျးကားကို ရုပျရှငျအဖွဈအသကျသှငျးတော့မှာဖွဈပါတယျ။ လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ကာတှနျးကားကို ရုပျရှငျအဖွဈရိုကျကူးတော့မှာဖွဈတဲ့အတှကျ ပရိသတျတှကေလညျး ဒီဇာတျကားမှာပါဝငျမဲ့ သရုပျဆောငျတှကေိုအထူးစိတျဝငျစားလကျြရှိနပေါတယျ။နှဈပေါငျး(၃၀)ခနျ့ရှိပွီဖွဈတဲ့
The Little Mermaid ဇာတျကားရဲ့ဇာတျကောငျတှဟော ပရိသတျတှမြှေျောလငျ့ထားသလို ထပျတူကတြဲ့သူတှဖွေဈဖို့လညျးအရေးကွီးပါတယျ။
ရသေူမလေးအရေီရယျနရောမှာသရုပျဆောငျမဲ့သူကို Halle Bailey အဖွဈကွငွောပွီးနောကျမှာ ဇာတျရုပျနဲ့မလိုကျဖကျဘူးဆိုပွီး အတျောလေးဂယကျရိုကျခဲ့ပါတယျ။မငျးသားလေးအဲရဈနရောကိုတော့ ထငျကွေးပေးခံရတဲ့အထဲမှာ Harry Styles တဈယောကျလညျးအပါအဝငျဖွဈနတောကွောငျ့ ပရိသတျတှစေိတျကွိုကျဖွဈမဲ့ပုံပါပဲ။ Harry Stylesဟာ မငျးသားလေးအဲရဈဖွဈပါဝငျသရုပျဆောငျဖို့ ဇူလိုငျလကတညျးကပွောဆိုနခေဲ့တာပါ။အခုတော့ဒီသတငျးကိုအတညျပွုလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။
(၁၉၈၉)ခုနှဈမှာထုတျလုပျခဲ့တဲ့ မူရငျးဇာတျလမျးမှာတော့ မငျးသားအဲရဈရဲ့သီခငျြးဆိုတဲ့အခနျးမပါဝငျပါဘူး။ ရုပျရှငျဇာတျကားအဖွဈပွနျလညျရိုကျကူးရာမှာတော့ ပုံစံအသဈနဲ့တှမွေ့ငျရမှာဖွဈပွီး မငျးသားအဲရဈက Alan Menken နဲ့ Lin-Manuel Miranda တို့ရေးသားတဲ့ သီခငျြးအသဈတဈပုဒျကိုသီဆိုဦးမယျလို့သိရပါတယျ။ ဒဈစနေးကတော့ အသံကောငျးကောငျးနဲ့သီခငျြးအဆိုပိုငျနိုငျတဲ့ မငျးသားတဈလကျကိုရှေးခယျြခငျြပုံရပါတယျ။ Harry ကတော့ ဒဈစနေးလိုခငျြသလို အတိအကဖြွဈလာခဲ့တဲ့မငျးသားတဈဦးဖွဈလို့နပေါတယျ။
ဒီဇာတျကားမှာပါဝငျမဲ့ဘုရငျကွီးထရိုငျတှနျနရောကိုတော့ Javier Bardem နဲ့ပွောဆိုနကွေပွီဖွဈပါတယျ။ စုနျးမကွီးနရောမှာတော့ Melissa McCarthy ကိုရှေးခယျြထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒဈစနေးကပွနျရိုကျကူးတဲ့ဇာတျကားတှဖွေဈတဲ့ “Aladdin” ဟာ လူကွိုကျမြားခဲ့သလို “Lion King” ဟာလညျး စံခြိနျတငျဝငျငှနေဲ့ထိပျဆုံးမှာရပျတညျနပေါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာရိုကျကူးဖို့အတှကျပွငျဆငျနတေဲ့ The Little Mermaid ဟာလညျး ပရိသတျတှအေကွိုကျနဲ့ထပျတူကြဦးမလားနျော….
“ကျွန်တော့်ရဲ့သူ “ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ မငိုစဖူး အရမ်းတွေငိုချပစ်လိုက်တဲ့ Kညီ”
အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ထုတ်လုပ်ဦးမဲ့ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့Selena Gomez
Covid-19 အတှကျအလှူအတနျးပွုလုပျပေးခငျြတယျဆိုတဲ့ သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုရှငျ အဘှား…
လူမှုကှနျရကျမှာ ပြံ့နှံ့နတေဲ့ အိန်ဒိယဗဒေငျနက်ခတျပညာရှငျတဈယောကျရဲ့…